“လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ…” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ…”
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on May 13, 2013 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary, Think Different | 19 comments
နည်းနည်းလောက်ပေါက်ကွဲခွင့်ပြုကြပါ။ စိတ်ထဲမှာလည်း တော်တော်လေး မွန်းကျပ်နေလို့ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ယုံကြည်မှုလျော့သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အလုပ်အကြောင်းလေး ရင်ဖွင့်ပါရစေရှင်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ High Season ကတော့ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ မေလကနေ စက်တင်ဘာလအထိကိုတော့ Off Season (တနည်းအားဖြင့် Low Season) လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် ဒီလိုမိုးရာသီအစမှာ ခရီးသည်တွေ လျော့နည်းစပြုလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေလည်း ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ကာလက စာရင်းတွေကိုရှင်း၊ လာမယ့် ခရီးသွားရာသီအတွက် ပြင်ဆင်ကြနဲ့ ထူးထူးခြားခြား အလုပ်ပါးသွားတယ်ရယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး။ (မိုးတွင်းဧည့်သည်များတဲ့ တစ်ချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ အလုပ်များနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။)
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတစ်ခုလုံးကို စိတ်မောလူမောနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရပါတယ်။ အခန်း booking တွေမရတာ၊ လေယာဉ် booking တွေ မရတာ၊ ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ ဧည့်သည်လိုချင်တဲ့ အနေအထားနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ညှိပေးရတာ၊ ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလုပ်ချင်တဲ့ ဧည့်သည်တွေရဲ့ ဆန္ဒတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးရတာ၊ မလုပ်ပေးနိုင်ရင်လည်း နားလည်အောင် ရှင်းပြရတာ စတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်း ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေဆို ဘယ်နေ့ဆို departure ထွက်ပြီဆိုပြီးတောင် ပြန်မယ့်နေ့ကို မျှော်မိပါတယ်။ အဲ့ဒီလောက်အထိပါ။ ဘာပဲပြောပြော နောက်ဆုံးတော့ အားလုံးဟာ ပြီးသွားတာပါပဲ။
မပြီးသေးတာကတော့ ဟိုတယ်တွေနဲ့ပါ။ မနှစ်က စပြီးတော့ ပြင်းထန်တဲ့ Policy တွေနဲ့ စာချုပ်တွေချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခန်းမလုံလောက်တဲ့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ contract ပေးတာတောင် ကံကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ policy တွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် လိုက်နာခဲ့ပါတယ်။ Deposit ပေးရမယ့်နေ့မှာ ဖြစ်အောင် ပေးပေးပါတယ်။ Full payment ပေးရမယ့်ရက်မှာ အတိအကျ ငွေချေပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနှစ်က ဧည့်သည်ရဲ့ inquiry တွေနဲ့၊ အလျင်လိုတဲ့အခြေအနေတွေကြားမှာ တစ်ချို့ policy တွေကို နားလည်အောင်မဖတ်လိုက်မိတဲ့အတွက် file တွေကို ရှင်းတဲ့အချိန်မှာ ပြဿနာလေးတွေ ကြုံရပါတယ်။
အဲဒီနားမလည်မှုက အခုထက်ထိရှိနေတုန်းပါပဲ။ နည်းနည်းလောက် ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မတိုင်ခင် Cancel လုပ်ရင် charges မရှိဘူး။ မဟုတ်ရင် policy အတိုင်း charges ကောက်မယ်ပေါ့။ အခု contract အသစ်တွေ ထွက်နေပါပြီ။ ဟိုတယ်တွေရဲ့ မတူညီတဲ့ Policy အရ အချို့ဟိုတယ်တွေက ဧည့်သည်တည်းမယ့်ရက်မတိုင်ခင် ရက် (၉၀) မှာ cancel လုပ်ပေးရပြီး အချို့ကတော့ (၄၅) ရက်၊ ရက် (၃၀) စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အများဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မတိုင်ခင် cancel လုပ်ရင် cancellation fees မပေးရဘူးဆိုတာကိုတော့ နားလည်ထားပါတယ်။
ဒါကလည်း ရှင်းပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စရံငွေ (deposit) ကို ပေးရမယ်။ အဲဒါက ပြန်မအမ်းငွေ (non-refundable) ပါ။ ပြီးတဲ့အခါ လက်ကျန်ငွေကိုတော့ တစ်ချို့ဟိုတယ်တွေက ဧည့်သည်လာမတည်းခင်မှာ ပေးချေခိုင်းတယ်၊ တစ်ချို့ကတော့ ဧည့်သည်ပြန်သွားမှ ပေးလို့ရတယ်။ ဒါကလည်း တစ်ဟိုတယ်နဲ့ တစ်ဟိုတယ် မတူဘူးပေါ့။ ဒါတွေကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ပါတယ်။
အဲ.. နားမလည်တာကတော့ သူတို့နှစ်ခုကြားက ခြားနားချက်ပါပဲ။ Non-refundable deposit ပေးရတဲ့ရက်က cancellation date ထက် များနေတာပါ။ ဥပမာ- ဧည့်သည်မတည်းမီ ရက် (၆၀) အလိုမှာ deposit ပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ cancellation date က (၄၅) ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့က (၄၅) ရက်မတိုင်မီအတွင်းမှာ booking cancel လုပ်တာ၊ အခန်းအရေအတွက်လျှော့တာတွေကို cancellation charges မရှိဘဲ လုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Payment Policy အရ ပေးထားပြီးတဲ့ deposit က ပြန်မရတော့ပါဘူး။ ဆိုတော့ နောက်ဆုံးမှာ ရက် (၆၀) မတိုင်ခင်အထိသာ cancel လုပ်ခွင့်ရတယ်၊ deposit ပေးပြီးသွားရင် cancellation policy နဲ့ မငြိသေးရင်တောင် cancel လုပ်လို့ မရတော့ဘူးလို့ပဲ မှတ်ထားလိုက်ရပါတော့တယ်။
အဲဒီလို မတူညီမှုတွေကို နားလည်မှုလွဲကြတဲ့ ကျွန်မတို့တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ခဏခဏတွေ့ရပါတယ်။ cancelleation policy ကိုပဲ ကြည့်လိုက်မိတဲ့အတွက် deposit ပေးပြီးမှ အခန်းလျော့သွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေဆိုရင် agent ဆီက ဘာမှ charge မလုပ်လိုက်မိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဟိုတယ်တွေနဲ့လည်း မကြာခဏဆိုသလို ဖြေရှင်းရပါတယ်။ အမှားကို သင်ခန်းစာယူရမယ် ဆိုပေမယ့် မနှစ်က အခြေအနေတွေကိုလည်း ကြုံခဲ့ရတယ်၊ ဒီနှစ် စာချုပ်တွေမှာလည်း policy တွေက ပိုတင်းကျပ်လာတယ်ဆိုတော့ ကြောက်စိတ်ဝင်နေမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
နားလည်မှုလွဲတယ်ဆိုတာ အတော်လေးတော့ ဆိုးပါတယ်။ အရင်တုန်းက Hotel နဲ့ Tour Company တွေကြားမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေ ရှိခဲ့လဲဆိုတာ မသိပေမယ့် ကျွန်မတို့လို Tourism လောကထဲဝင်ကာစ လူငယ်တွေအနေနဲ့တော့ အခုနှစ်ပိုင်း ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြားမှာ စိတ်ညစ်မိတာ အမှန်ပါပဲ။ ကိုယ့် agent နဲ့၊ ကိုယ့် file နဲ့ အစအဆုံးအကုန်လုံးကို တာဝန်ယူထားရတဲ့အနေအထားမှာ ဟိုဘက် agent ရဲ့ demand နဲ့ ဒီဘက်က policy ဆိုတဲ့ ဘေးကျပ်နံကျပ်အခြေအနေတွေက ရှေ့ဆက်ဖို့ကို ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေပါတယ်။ ဟိုတလောက ကျွန်မ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
မန္တလေးက နာမည်ကြီးဟိုတယ်တစ်ခုနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
-ဧည့်သည်က ဒီဟိုတယ်နဲ့ပဲ လိုချင်ပါတယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက် အခန်းလွတ်မယ့်နေ့ကို လှမ်းမေးပြီး အဲဒီရက်နဲ့ program ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။ booking လည်း တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မလက်ထဲကို reply ပြန်မရောက်လာပါဘူး။ ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ အဲဒီ file က ပထမအကြိမ် cancel ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက reply မရထားတဲ့ booking ကို cancel မလုပ်လိုက်မိပါဘူး။ (ကျွန်မရဲ့ အမှားပါ။)
-ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အဲဒီ ဧည့်သည်က ရက်အသစ်နဲ့ ထပ်ပြီး confirm ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ ဟိုတယ်ကိုပဲ ရက်အသစ်နဲ့ ထပ်ပြီး booking တင်ပါတယ်။ Tour code က တစ်ခုတည်းပါ။ Waiting List ဆိုပြီး အခန်းမရကြောင်း reply လုပ်ပါတယ်။ တစ်ခြားဟိုတယ်တွေနဲ့ အားလုံး confirm ဖြစ်ပြီးကာမှ ထပ်မံကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ cancel ထပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းမရထားတဲ့ booking ဖြစ်တဲ့အတွက် သီးသန့် cancellation mail မပို့လိုက်ပါဘူး။
-တစ်ရက်တော့ ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ reconfirm လုပ်တာပါ။ (ဧည့်သည်ဝင်ကာနီးဆိုရင် ဟိုတယ်ဘက်ကရော၊ ကျွန်မတို့ဘက်ကရော booking ကို reconfirm လုပ်ပါတယ်။) ပထမတင်ထားတဲ့ ရက်တွေအတွက် reconfirm လုပ်တာပါ။ အဲဒီမှာ လွဲတော့တာပါပဲ။ ကျွန်မတို့အတွက် သူပြောတဲ့ Tour Code အတွက်က ဒုတိယ booking ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူက ပထမ booking အတွက် confirmation fax ကို ပြန်ပို့လာပါတယ်။ သူတို့ပို့ပြီးသားပါတဲ့။ ကျွန်မတို့ဘက်မှာလည်း လက်ခံရရှိထားခြင်း မရှိပါဘူး။ လက်ခံတဲ့သူကို မှတ်ထားပါသလား ဆိုတော့လည်း သူတို့ဘက်က အလုပ်များတဲ့အတွက် fax ပို့ပြီးရင် ရမရဆိုတာ ဖုန်းပြန်မဆက်ဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ (ကျွန်မတို့က booking ကို mail နဲ့ ပို့တာပါ။ သူတို့က အဲဒီ mail ကို print ထုတ်၊ confirm တုံးထုပြီး fax ပြန်ပို့ပေးတာပါ။)
-Fax နဲ့ ပတ်သက်တာကတော့ လက်ခံရရှိကြောင်း record မရှိတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ဘက်က ပြောလို့ရပေမယ့် သူတို့က ထပ်ပြောလာပါတယ်။ deposit တောင်းတဲ့ invoice ပို့ထားပါတယ်တဲ့။ ဖြစ်ချင်တော့ account က ကျွန်မကို ချက်ချင်းစစ်မပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း သူ့တို့ account ဆီက ဘာ information မှ မရထားတဲ့အတွက် လတ်တလောအခြေအနေမှာ ကျွန်မတို့ဘက်က deposit invoice ကို ရထားလျက်နဲ့တောင် cancellation ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို အကြောင်းမပြန်မိတဲ့ပုံ ဖြစ်နေပါတယ်။
-ဘာပဲပြောပြော (၃) ရက်ပဲ လိုတော့တဲ့ အခြေအနေမှာ cancellation policy အရကတော့ 100% cancellation fees ပေးရမှာပါ။ အခန်းက (၅) ခန်း၊ နေမှာက (၃) ည၊ amount က အတော်လေး များပါတယ်။
-ဒါပေမယ့် သူတို့ ပြန်ပို့တဲ့ fax ပေါ်မှာ No Show Policy ဆိုပြီး တုံးထုထားပါသေးတယ်။ No Show ဆိုတာ ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ Check-in ၀င်မယ့်နေ့မှာ ဧည့်သည်ရောက်မလာတာပါ။ အဲဒဲီလို No Show ဖြစ်သွားရင် တစ်ညစာအခန်းတန်ဖိုးကို အပြည့်ပေးရမယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ No Show တောင် တစ်ညစာပဲကောက်မယ်လို့ ပြောထားတဲ့အတွက် (၃) ရက်လောက် ကြိုသိတဲ့ ဒီ booking အတွက် No show policy အတိုင်း charge လုပ်ဖို့ ကျွန်မတို့ဘက်က request လုပ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်ကတော့ Contract အတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုပြီး ငြင်းခဲ့ပါတယ်။
-ဒါကြောင့် နောက်တစ်နေ့မှာတော့ Contract ထဲက policy တွေကို အကုန် ပြန်ကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ account ရဲ့ data အရ အဲဒီ booking အတွက် deposit မပေးထားပါဘူး။ နောက် ပြန်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ဟိုတယ်ဘက်က account ကို booking cancel ဖြစ်ကြောင်းလည်း အကြောင်းကြားထားပြီးသားပါ။ အဲဒီနေ့က ပို့တဲ့ mail မှာ file (၅) ခုစာ deposit invoice တွေ ပါပါတယ်။ confirm ဖြစ်တဲ့ (၂) ခုအတွက် deposit ပေးထားခဲ့ပြီး ကျန်တဲ့ cancelled file (၃) ခုအတွက် deposit ပေးထားခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
နောက်ပြီး payment policy အရလည်း deposit မရထားတဲ့ booking က automatic cancel ပါ။ ဒါကြောင့် contract အတိုင်းသွားရင်လည်း ကျွန်မတို့ဘက်က ပြောပိုင်ခွင့်အပြည့်ရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်ဘက်က account နဲ့ reservation ကြားက information gap ပါ။
-ဒါပေမယ့်..ဒါပေမယ့်က တော်တော်လေး ဆိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့က long term relation ကို ကြည့်ရပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ် ဒီလို ပြဿနာဖြစ်လို့ နောင်တစ်ချိန်မှာ အခန်းမပေးတော့မှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။ မန္တလေးမှာက အခန်းများများရှိပြီး ကျွန်မတို့ဧည့်သည်တွေနဲ့ အဆင်ပြေမယ့်ဟိုတယ်က များများစားစားမရှိပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့ဘက်ကလည်း ကျွန်မတို့ agent နဲ့ သူတို့နဲ့က relationship ကောင်းကောင်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ တင်သမျှ booking တိုင်းကလည်း confirm ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဘက်က deposit မရထားရင်တောင် အခန်းကို မဖျက်ပါဘူးဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ကလည်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ (၁၅) ခန်းကို ပြန်ရောင်းဖို့ အဆင်မပြေဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
-ဒါကြောင့် Agent ဆီက ပိုက်ဆံလုံးဝမရထားတဲ့ file အတွက် cancellation fees ကို အဆင့်ဆင့်ညှိရင်း ညှိရင်း နောက်ဆုံးမှာတော့ အခန်း (၅) ခန်းအတွက် တစ်ညစာအခန်းခကို ပေးချေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ ဟိုတယ်ဘက်ကလည်း ဒီထက်ပိုပြီး လျှော့မပေးနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ အဖြေက ဒီလိုပဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ကျွန်မအတွက်ကတော့ သင်ခန်းစာကောင်းကောင်း ရခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Sales ကိုပဲ လုပ်လာခဲ့တဲ့ ကျွန်မက reservation တွေ အရမ်းများလို့ ကိုယ့် file ရဲ့ reservation တွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုင်တဲ့နေရာမှာ ကြုံလာခဲ့ရတဲ့ အမှားတွေ၊ သတိလက်လွတ်မှုတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်မိသွားပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာလည်း စိတ်ညစ်မိတာတော့ အမှန်ပါ။ Contract အသစ်တွေကို ဖတ်လေလေ ဆက်ဆံနေရတဲ့ ဟိုဘက်က agent တွေနဲ့ ပြောရမယ့်အရေးကို စိတ်ညစ်လေလေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိသေးတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာတော့ လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုလို့ပဲ သတ်မှတ်ပြီး ရအောင် ဖြတ်ကျော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် ၀င်လာတတ်တဲ့ မ၀ံ့မရဲစိတ်တွေကိုတော့ ရအောင်မောင်းထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
ဒါက ကျွန်မတို့ agent တွေဘက်က အပိုင်းပါ။ ရွာထဲမှာ ဟိုတယ်ဘက်က လူကြီးတွေ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဟိုတယ်ဘက်က အကြောင်းလေးတွေကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ သူ့သဘာဝ သူ့အခက်အခဲနဲ့သူ ရှိတတ်ကြပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲက လူမှသာလျှင် သိနိုင် ခံစားနိုင်ကြပါတယ်။
ခရီးသွားတစ်ယောက်တော့ ဖြစ်နိုင်တာမို့ …………
ဒီပိုစ့်လေးကပေးတဲ့ ဗဟုသုတက အကျိုးများလှပါတယ်။
တီတီ နောက်က လိုက်ဘာဒယ် … ဟီးဟီး
နေရာဒိုင်းမှာ သူ့ အခက်အခဲနဲ့ သူချည်းဘာဘဲ …
((ဘေးအမြင် သက်သာတယ် ထင်ပေမယ့်)) သူ့ အခက်အခဲနဲ့ သူ ရှိနေဒါဘာဗျဲ …
ဒီလုပ်ငန်း အကြောင်း ဘာမွှ မတိဘေမယ့် …
တာဝန်ကျေ .. အဲလေ .. ဗဟုသုတ အဖြစ် ဖတ်ရှု အားပေးတွားဘာဒယ်လို့ …
-အားပေးတာ ကျေးဇူးအကြီးကြီးပါ အန်တီဌာနမှူးရှင့်… Fighting!!!!!!!
-အဟမ်း..မှားတာလည်း ကြည့်မှားပါ မဟာရာဇာ… ဘာ တာဝန်ကျေတုန်း.. တေချင်ရို့ရား…
ကိုယ်လည်း ဒီလုပ်ငန်းထဲကမဟုတ်ပေမယ့် အဲဒါမျိုးစိတ်ဖိစီးမှုမျိုးခံစားခဲ့ဖူးတယ်.. မွန်မွန်ကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူး.. အစ်မဆို တစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆို ညအိပ်မပျော်တာတော်တော်ဆိုးတယ်..
ဟိုတယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးထူးဆန်းလာပါလိမ့်မယ်..
အစ်မရေ..အိပ်မပျော်တာမဟုတ်ဘူး…ဖျားကို ဖျားသွားတာ… တစ်ပတ်လောက်က အတော်လေး ခံလိုက်ရတယ်….. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစားဆို အသေစားတဲ့ မွန်မွန်..အဲ့ရက်က ဘာမှကို မစားနိုင်ဖြစ်သွားတာ…
လုံးဝ စိတ်ချရအောင် လုပ်ပေးပြီသာမှတ်
ဟိုတယ်မပိုင်ပေမယ့် ပိုင်တဲ့ဟိုတယ်တော့ ရှိမယ်ထင်ပါ့… ဟီး…. နောက်တာ…
ရော် .. ရွာထဲမှာ ပါ ခေါင်းစားအောင်လုပ်သကိုး … :hee:
လူ အမျိုးမျိုး စိတ် အထွေထွေ မို့လို့ ပြောရတော့ခက်ပါသည် ။
ဒါပေမဲ့ Crystalline က ဟိုတယ်လူမိုက်လုပ်ပေးထားလို့ လေပွကြည့်ပါဦးမယ် ..
၁)ပထမ ကတော့ တည့်တည့်ပြောရင် နှစ်ဘက် လွတ်ကြလို့ ဒီပြဿနာ တက်ကြတာပါ .. မကြာမကြာလည်း တက်ကြပါတယ် .. မွန်မွန်လည်း ၀န်ခံထားပါတယ် ။ booking တင်ထားပြီး reply ပြန်မရရင် follow up လုပ်ရမှာ ပါ ။ လုပ်ကိုလုပ်ရမှာပါ ။ ငါ reply မှ မရတာ ဆိုပြီးcancell မလုပ်နေလိုက်မိတာ အမှားဖြစ်သွားတာပေါ့ ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ စာက ဟိုဘက် ကရနေပြီလေ ။ သူ ကလည်း အခန်း ရတယ် မရဘူး ဆိုတာကို ပြန်ပို့ကောင်းပို့ပါလ်ိမ့်မယ် ။ မပို့ဘဲလဲ သူ့ဘက်က ပျက်ကွက်ကောင်း ပျက်ကွက်နေပါလိမ့်မယ် ။ မြန်မာပြည်မှာက mail မကောင်းတာ ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းတာ ကို အပြစ်ပုံချကြပါတယ် ။ တကယ်တော့ မကောင်းလည်း ကောင်းအောင် လုပ်ရမှာ ကိုယ့်တာဝန်ဖြစ်နေပါတယ် ။ နောက် FAX နဲ့ ပြန်ပို့ထားတယ် ဆို ရင်ဟိုတယ် ဆီက fax report တောင်း၇မှာပါ ။ ဟိုတယ် ဘက်ကလည်း များသောအားဖြင့် fax ပို့ပြီးရင် မရဘူးပြောလွန်းလို့ fax report တွေ အမြဲ သိမ်းထားရပါတယ် ။ သိမ်းလေ့ ရှိကြပါတယ် ။
ဒီနေရာ မှာ ကြားဝင် တစ်ခု ပြောရရင်တော့ မြန်မာတွေ က သူတပါး နံမည်မေးရမှာ အင်မတန်ဝန်လေးသလို မေးလာရင်လည်း ကိုယ့်နံမည် မပြောချင်ကြပါဘူး ။ ကျွန်တော် အပါအ၀င်ပါဘဲ ။ အဲ အလုပ်ထဲရောက်လာပြီဆို အထူးသဖြင့် အခုလို စကားများ ကြရတဲ့ နေရာတွေမှာ ဆို နံမည် မေး မှတ် လုပ်ကို လုပ်ရပါတယ် ။ အသစ်တွေက အကျင့် မရှိသေးရင် နံမည် မမေးမိတာ ။မှတ်ရကောင်း မသိတာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် ။ အခု မွန်မွန် ပြဿနာ မှာလား ဟိုတယ်ဘက်က fax ပို့ခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် ဘယ်သူလက်ခံ လဲ မမေးမိရင်တောင်မှ fax report ပြနိုင်ရပါမယ် ။ အဲ့ဒါမှ လည်း မပြနိုင် ၊ လက်ခံသူ နံမည်လည်း မမေးထားရင် ဟိုတယ် ကို သူတို့မှားတယ် ပြောနိုင်ပေမဲ့ cancell မလုပ်ထားတာ ကိုယ့် အမှားဖြစ်နေတော့ ပြန်ထောက်ခံရတာပါ …
ဟိုတယ်ဘက်ပြန်ကြည့်ရင်လည်း tour code နဲ့ ဧည့်သည်နံမည် တူနေပေမဲ့ဒုတိယ တစ်ခါတင်တာကို သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ရက်စွဲ မတူ တော့ဘူးလေ ။ အဲ့ဒီ့ ရက်ကိုဘဲ ပြန်တင်တယ်ဆိုရင်တော့ သတိထားမိကောင်းထားမိပါလိမ့်မယ် ။ waiting list ပေးထား ပြီး အဲ့ဒါ ပျက်တဲ့ အခါမှာလည်း အဲ့ဒီ့ ဒုတိယ တင်တာကို cancellation fees တောင်းတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ပထမ တင်ထားတာ ကိုဘဲ တောင်းတာဆိုတော့ သူတို့ဘက် က အဲ့ဒီ့ အထိဆိုရင်တော့ ဘယ်သူ confirmation fax receive လုပ်လဲ မမေးမိတာက လွဲရင် မမှားပါဘူး ။
မွန်မွန်စာ မှာ နားမလည်တာတွေပါနေပါတယ်။
မွန်မွန်က cancellation မလုပ်မိဘူးလို့ပြောတယ် ။
deposit တောင်းထားတဲ့ invoice ပို့ထားပါတယ် ဟိုတယ်ကပြောတယ် လို့ မွန်မွန်ပြောတယ်
နောက်တစ်ခါ နောက် ပြန်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ဟိုတယ်ဘက်က account ကို booking cancel ဖြစ်ကြောင်းလည်း အကြောင်းကြားထားပြီးသားပါ။
ဆိုတာက account ,, account ခြင်းလုပ်ကြတာ မဟုတ်လား ။ အဲ့ ဒီ့ အချိန်မှာ နှစ်ဘက် account မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ် ။ account နှစ်ဘက်လုံးက သူတို့ reservation သမားတွေကို သတိပေးရမယ် ။
Tour ဘက် က deposit တောင်းနေတယ် ။ cancel မလုပ်ထားဘူးလား မေး ရမှာဖြစ်သလို
Hotel ဘက် account ကလည်း cancel ဖြစ်သွားပြီပြောနေတယ် ။ ဟုတ်လား ဆိုပြီး သူတို့ reservation ကို မေးရမှာပါ ။
ဘာဘဲပြောပြော အဲ့ဒါဆိုလျှင်တော့ ဘယ်တုန်းက လုပ်ထားတာလဲ။ စာနဲ့လား ဖုန်းနဲ့လား နဲ့ အဲ့ဒီ့ အပေါ် မှာ ထောက်ပြပြီး ဟိုတယ်ကို တာဝန်ယူခိုင်းရမှာပါ ။ သို့သော်လည်း ဟိုတယ် က account အချင်းချင်းလုပ်ကြတာကို တရားဝင်ယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
နောက် policy အရ deposit မပေးရင် ဘိုကင်ပျက်တယ် ဆိုထားပေမဲ့ .. မွန်မွန်ပြောတဲ့ deposit က ကိုယ့်ဆက်ဆံရေးကောင်းလို့ မပေးဘဲထားလဲ မဖျက်ပါဘူးလို့ ဂတိက၀တ်ပြုထားခဲ့ ကြရင်တော့ ပေါ်လစီအရ သူကလည်း မသွားထားတဲ့ သဘောဖြစ်သွားတော့ ကိုယ်ကလဲ ပြန်ပြောရခက်တဲ့ အနေအထားရောက်သွားတယ် ထင်ပါသည် ။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အဟဲ … ဟိုတယ် ဘက်က ပြောရ၇င်တော့ (၁) tour code က ရက်မတူတော့ရင် ပြောင်းသုံးသင့်ပါတယ် ။ (၂) confirm reply မလာတဲ့ booking ကို သတိမထားကြတာ အတော်အန္တာရယ်များပါတယ် ။ tour ကုမ္မဏီ အတွက်ပြောတာပါ ။ ဧည့်သည်ကလာဖြစ်ပြီးမှ အခန်းရှိမနေပါဘူး။ ဟိုတယ်က booking လက်ခံ ရှိမနေပါဘူး။ ဘယ်မှာလဲ confirmation letter ဆို သေဘီဆရာဘဲ ။။
ိ်မွန်မွန်ပြောတဲ့ ဒါပေမဲ့ ..ဒါပေမဲ့ က ပြန်ဝဋ္ဋ်လည်တာလို့ဘဲ ပြောပါရစေ .. အရင်တုန်းက အဲ့ဒီ့ long term relationship ကို ဟိုတယ်က ခံခဲ့ရတာလေ .. :hee:
မွန်မွန့်ပြဿနာ ပြီးတော့ ..
1.	No shown policy .. အဲ့ဒါကို တစ်ညစာ ဘဲ ယူမယ် ရေးထားတာ က ကြောင်တာပါ ။ ဘယ်နှစ်ရက်မှ မလုပ်ရင် ၁၀၀% ပြောပြီးမှ no shown မှာ one night ဆိုတာက ဘယ်က သွားကူးချထားလဲ မှ မသိတာ .. သွား မသင်ပေးနဲ့ တိတ်တိတ်နေ ..
2.	၆၀ ရက်မှာ deposit ပေးရမယ် ။ non refund ဆိုတာက ဟိုတယ်တွေ အနေနဲ့ ပြန်ရောင်းလို့ မရခဲ့ရင်မနာအောင်ပါ ။ cancellation ကို ၄၅ ရက်မှ စယူတာက အဟဲ tour agent တွေကို ချစ်လို့ ပါ ။ 60 days မှာ cancellation ရက်စမယ် ပြောရင် agent တွေ ပိုရောင်းရခက်ပါလိမ့်မယ် ။
deposit က night အားလုံးအတွက်ယူထားတာ မဟုတ်ဘူးလေ ။ some percentage လောက်သာယူထားတာ။ Cancellation မှာက အခန်း အရေအတွက် x total night x % တွေနဲ့ လာပြီလေ ..
ကဲ ဒါလည်း မွန်မွန်ပြောသလိုထားလိုက်ပါတော့ ။
Tour agent တွေ နှိပ်စက်ထားတာ တွေ အလူးအလဲ ခံထားရတာတွေ အများကြီးပါ ။ မွန်မွန်ရေ ..
ငါ့ agent ကလွဲရင် အခြား အဖွဲ့ထားရင် မင်းတို့ ဆီမှာ မထားတော့ဘူး ဆိုပြီး ရာဇသံပေး အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတာ ။ FEC နဲ့ US ငါကြိုက်တာပေးမယ် ။ ယူချင်ယူ မယူရင် နေ ။ FEC တွေ ဈေး အရမ်းနိမ့်နေတဲ့ အချိန် FEC မယူလို့ ဆိုပြီး ၀န်ကြီးဌာန တိုင်စာ ပို့ခဲ့တာတွေ ။ (သူတို့ ကတော့ ဘာနဲ့ ယူလိုက်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိနေတဲ့ကိစ္စ) တစ်ဒေါ်လာတန်ကို တစ်ထောင် နှစ်ထောင် အထိပေးပြီး ယူချင်ယူ မယူချင်နေ ဆိုခဲ့တာ ။ သုံးလ လဲ မရ ။ ခြောက်လ လည်း မရ နှစ်ပါတ်လည် လောက်မှ ခခယယ နဲ့ တည်းသွားတဲ့ တည်းခိုခ တွေ တောင်းခဲ့ ရတာ ။ ငိုချင်းချရရင် ဟိုတယ်တွေမှာလည်း အမာရွတ်တွေ အများကြီးနဲ့ ပါ ။
သို့သော်လည်း ဘာတွေ ဘယ်လောက်ပြောပြော နောက်ဆုံးတော့ TRUST နဲ့ ဂတိက၀တ်တွေ ပျက်သုန်းကြတာပါ ။ ဒါကြောင့် ရှုပ်ထွေး ပွေလီတဲ့ policy တွေ လုပ်လာကြတာပါ ။
အချို့ မှန်ကန်စွာ လုပ်သော ကုမ္မဏီများ ဟိုတယ်များ လည်းရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ ကုမ္မဏီချင်း ဟိုတယ်ချင်းကြတော့ ပြေလည်ကြတယ် ထင်ပါသည်။
ရေးရရင်တော့ ဟိုတယ်တွေရဲ့ ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေလည်း အများကြီး ။ ရေးနိုင်သေးဘူးရယ်။
အတိုချုံးရရင် ဟိုတယ်တွေရဲ့ အဓိက ပြဿနာ က မြန်မာပြည်က အခြားနိုင်ငံများလို လေယာဉ် ၅မိနစ် တစ်စီး ဆင်းသက်ပျံသန်းနေတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် အခန်းက ကြို မရောင်းရင် ကုန်ဖို့ ခဲယဉ်းတာ အကြောင်းရင်းတစ်ခု ။
အခန်းရေ များများစားစား မရှိတဲ့ အတွက် over booking မယူရဲတာက ပြဿနာ တစ်ခု ။
ရန်ကုန် အထိုင် tour company များဈေးနုန်းမြင့်တာ cancellation တွေ policy တွေပေါ်မှာ အော်ဟစ်နေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ AGODA က ကြိုက်သလောက်ဈေး နဲ့ ကြိုက်သလိုရောင်း ။ Booking တက်လာတာနဲ့ ပျက်ခဲ့ ရင် ၁၀၀% cancellation ပေးပြီး payment လည်း မြန်နေတာ ကြည့်ရင် အခန်းသိပ်မရှိတဲ့ မြန်မာပြည် ဟိုတယ်တွေကို AGODA တို့ လို online booking တွေမသိမ်းပိုက် အောင်လည်း ကြံဆောင်ကြဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့ဦးလို့ …
လေးလေးထူးဆန်းရေ..ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်… သမီးလည်း terms & conditions တွေကြားမှာ အတော်လေးမူးနေလို့ ပို့စ်ရေးဖြစ်လိုက်တာပါ…
-cancellation ကို စာနဲ့ မပို့မိတာပါ… account က deposit ပေးကာနီးတော့ သမီးနဲ့ လာတိုက်ပါတယ်… booking confirm မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်လို့ သမီးတို့ account က ဟိုဘက် account ကို cancel လို့ပြောပြီး deposit မပေးလိုက်တာပါ… သမီးကလည်း အဲလိုပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ cancel မပို့လည်း ရတယ်ဆိုပြီး ပေါ့ဆမိလိုက်တာပါ… (အဲဒါတွေကလည်း နောက်မှ သေချာပြန်စဉ်းစားပြီး မှတ်မိတာ..ဖြစ်ဖြစ်ချင်းက ငါ့အမှားပဲဆိုပြီး ထူပူနေတာနဲ့ ဘာမှမသိတော့ဘူး..နောက်ရက်ကျ ဖျားရော..ဟီး..)
-နာမည်ကိစ္စကတော့ တစ်ခါတစ်ခါ မေးမလို့ရှိသေး ဖုန်းချသွားတာတွေက ရှိသေးတယ်… သမီးကတော့ နာမည်မေးလည်း ပျော်ပျော်ကြီး ပြောပေးလိုက်ပါတယ်…
-ကတိက၀တ် ပြုထားခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပေမယ့် အမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ ဟိုတယ်ဆိုတော့ သူတို့ကလည်း အရမ်းမတင်းကျပ်လိုက်တာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်… long term ပေါ့နော်…
-ဟဲ..ဆင်ခြေပေးရရင်တော့ booking ကို follow up မလိုက်မိတာက ဧည့်သည်ဘက်က သေသေချာချာ confirm လို့ မပြောသေးလို့ပါ… တစ်ခါတစ်ခါကျ ဟိုတယ်တွေက booking ဝေးသေးရင် reply မလုပ်ပါဘူး… အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ပါပါတယ်…
-အဲ့လို policy က နှစ်မျိုးလုပ်တော့ သမီးတို့က ရောကုန်တာပေါ့လို့… ရက် (၆၀) မတိုင်ခင်လည်း 30%၊ (၄၅) ရက်နောက်ပိုင်းဆိုလည်း 30% ဆိုတော့ မသိတော့ဘူး ဖြစ်သွားတာ… deposit ဆိုတာလည်း တကယ်တော့ cancellation fees လိုပါပဲ… booking ပျက်ရင် ပြန်မပေးဘူးဆိုတာ သိပ်တော့လည်း မထူးပါဘူး… ဟိုတယ် တစ်ခုဆို cancellation period ရော၊ deposit date ရော အတူတူပဲ… ရက် (၆၀) မတိုင်မီ ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်.. ရက် (၆၀) ဆို deposit ပေး… (၆၀) ကနေ (၄၅) ရက်အတွင်းဆို အဲဒီ deposit က non-refundable ဖြစ်တဲ့အတွက် cancellation fees ဖြစ်သွားတယ်… အဲ့လိုလေးဆိုတာ့ မှတ်ရတာ မရောတော့ဘူးပေါ့… လေးလေးတို့ချစ်တာက သမီးတို့တွေ လျော်ရမယ့်ကိန်း.. တကယ်တမ်းက deposit လည်း အခန်းခ x total room x total night x % ပါပဲ..တူတူပဲကို… ဟင့်…
-AGODA .. အဲ့ဒီ နာမည်ကို အခုတလော တော်တော်လေးကြားနေပါတယ်… လက်ခံပါတယ် လေးလေးရေ… ဒီလိုအချိန်က demand အရမ်းများနေတယ်…ဒီလို နာမည်ရလာတဲ့ နိုင်ငံကို AGODA က ချဉ်းကပ်လာတာလည်း မဆန်းပါဘူး… ဒါပေမယ့်… တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းပေါ့ လေးလေးရယ်.. သူတို့က ခေတ်ကောင်းတဲ့ အချိန်ပဲ ငွေထုပ်ပိုက်ပြီး ရောက်လာကြတာလေ… မတော်တဆ တစ်ခုခုဖြစ်ကြည့် .. သူ့ငွေထုပ်ကို သူပိုက်ပြီး ပြန်ထွက်သွားမှာ..နောက်ပြီး Tourism impact …. နေရာတိုင်းမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆိုတာရှိပါတယ်… ဧည့်သည်တွေအလာများလို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို၊ ပျက်စီးသွားတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ သဘာဝတွေကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းမှာက တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေပါ…. အပြင်ကလာတဲ့သူတွေက ငွေထုပ်တစ်ခုပဲ ရှိတာလေ… မမြင်ရတဲ့ ကံကြမ္မာကြောင့် Tourism ကြီး တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်ပြီး ဒီ Tourism ကို ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မှာက နိုင်ငံတွင်းက လုပ်ငန်းရှင်တွေပါပဲ… အပြင်ကတော့ သူ့အတွက်အခြေအနေမကောင်းရင် ပြန်ထွက်သွားမှာပဲ… ဒါကြောင့် တစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ကြည့်နေမယ့်အစား အချင်းချင်း ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ ဒီ industry ကို အရှ
ည်တည့်တံအောင် လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ…
agoda ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်လောက်ကတဲက မြန်မာ့ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်စပြုနေပါပြီ …အခုနောက်ပိုင်း လူတွေအတင်များလာတာတော့ AGODA http://www.agoda.com / ရယ် Hotelbeds http://www.hotelbeds.com ရယ်ပါ…တင်လဲတင်ချင်စရာပါပဲ…ရန်ကုန်ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာ…အခန်းအမြင့်( Suite ) တွေပဲကျန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ AGODA မှာကအခန်းအနိမ့် ( ဥပမာ – Delux ) ရှိနေသေးတယ်..ဈေးကလဲ ရန်ကုန်က တိုးကုန်ပဏီတွေရထားတဲ့contract ဈေးနဲ့က မတိမ်းမယိမ်းဆိုတော့ကာ…အဲ့ဒါကအဓိကအချက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်…ဘယ်သူမှအေးဂျင့်ကတဆင့်မသွားတော့ဘူးလေ…
ဒါပေမဲ့ မွန်မလေးရော ကထူးဆန်းရော ရေးပြသွားတာတွေက အားလုံး
ဗဟုသုတရပြီး ကိုယ်တိုင်ကြုံလာရင် သတိပြုစရာအချက်တွေမို့…
ရေးထားတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းက ဂဂဏဏ သိပ်မသိလေတော့ ဘာဆွေးနွေးပြောရမှန် မသိဘူးလေ။
ဒါပေသိ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာတော့ အဆင်မပြေမှု နဲ့ အခက်အခဲဆိုတာတော့ ရှိတတ်စမြဲပါ လုံမလေးရေ၊
အားမငယ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ လို့တော့ အားပေးလိုက်မယ်နော်။
ဦးမိုက် နဲ့ လေးလေးခ…
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါနော်… ရွာထဲမှာ ရင်ဖွင့်တာပါ..
ဦးကြောင်ကြီး ဘိထောင်မည်… ဘွတ်ကင် ကျွတ်ဆင် တခုမှ မလို… ကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ် ကာလပေါက်ဈေး.. ဝေါ့လ်ခ်ကင် ဝဲလ်ကမ်း.. မှတ်ပုံတင်မစစ် စီစီတီဗွီကင်မရာ မရိုက်ပါ…
အန်တီတို့ ဧည့်သည်တွက် booking လုပ်ရင်3star လောက်ဆို deposit $100လောက်ပဲပေးရင်ရတာတွေပဖူးတယ်။
relation ကောင်းသွားရင် ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။
အခု business တွက် လာတဲ့ ဂငယ်တွေတောင် ဈေးပေါတာပဲ ငှားပေးပါဖြစ်လာပြီ။
နောက်ဆို home stay တောင်နေကြမလား မသိဘူး။
ဖွလိုက်ပါအုံးမယ် အဟီး…ဟိုတယ်တွေမှာက သိသလောက် ဈေးသုံးမျိုးလောက်ရှိပါတယ်…( Travel , Company , Embassy ) ဆိုပြီးပေါ့ ….Companyကြီးတွေရယ်, Embassyတွေ ကို ပေးတဲ့ဈေးက Cooperate rate က ထင်မှတ်မထားလောက်အောင် သက်သာပါတယ်….Travel agent rate ထက် ..မဆိုစလောက်လေးများယုံပါပဲ…ထူးခြားတာတစ်ခုက cancellation policy ပိုင်းမှာ တင်းကျပ်မှုမရှိသလောက်ပါပဲ … 24 နာရီကြိုပြောရင် ရပါတယ်..တစ်ခါတစ်လေ no show ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် မယူတာတွေရှိပါတယ်…Travel တွေကိုကျတော့ အင်မတန်တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ဆိုတော့ကာ ..မကျေနပ်တာတွေများလွန်းခဲ့လို့ ..တမင်လက်စားချေနေတဲ့အတိုင်း
သြော်ရှုပ်ယှက်ကို ခတ်နေတဲ့ လုံမလေးတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါလားးးးးးးး
အဲ့ဒလောက် အလုပ်လုပ်မှ အိုစခေမယ်ဆိုလို့ဂဒေါ့………
သေချာ… ကျုပ်သာဆိုရင်…. အလုပ်ပြုတ်ပီ…………